रियल मड्रिडले जित्यो क्लब विश्वकपको उपाधि : रच्यो इतिहास !
प्रकाशित ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
स्पेनिस महारथि रियल मड्रिडले लगातार तेस्रो वर्ष फिफा क्लब विश्वकपको उपाधि जितेको छ । शनिबार राति दुबईमा भएको फाइनल भिडन्तमा उसले दुबईको क्लब अल आइनलाई ४–१ ले हराउँदै लगातार तेस्रो वर्ष उपाधि पोल्टामा पारेको हो ।
दुबईको जिएसजी रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा रियललाई प्रभावशाली जित दिलाउन ४ जना फरक–फरक खेलाडीले गोल गरे । रियलले पहिलो हाफमा १ गोल गरेको थियो भने २ गोल दोस्रो हाफमा २ हानेको थियो । उसले दोस्रो हापमmा १ गोल उपहार पायो भने १ गोल खायो ।
रियलका लागि खेलको १४औं मिनेटमा लुका मोड्रिकले डि–एरियाभन्दा बाहिरबाट लङ सर्टमा गोल आकर्षक गोल गरेका थिए । उनकै गोलको मदतमा रियल पहिलो हाफमा १–० ले अगाडि रह्यो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा रियलका लागि ६०औं मिनेटमा मार्कोस लोरेन्टोले लामो दुरीबाट भली प्रहारमा दर्शनीय गोल गरे । त्यसपछि खेलको ७८औं मिनेटमा कप्तान सर्जियो रामोसले हेडिङ गोल गरेपछि रियल ३–० ले अगाडि रह्यो ।
त्यसपछि खेलको ८६औं मिनेटमा अल आइनका लागि टुस्कासा सिओतानीले गोल गर्दै गोलअन्तर ४–१ मा झारे । तर, ९० मिनेटपछि थपिएको समयमा अल आइनका याहैया नदेरले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि खेल रियलले ४–१ ले जित्यो ।
यससँगै रियलले यस उपाधिमा कीर्तिमानसमेत बनाएको छ । उसले लगातार तीन वर्ष यो उपाधि जितेर इतिहास रचेको हो । हालसम्म यो उपाधि कुनै पनि टिमले लगातार तीन वर्ष जित्न सकेका थिएनन् । सँगै, रियल अब यो उपाधि सर्वाधिक धेरै ४ पटक जित्ने टोलीसमेत बनेको छ ।
रियल यस प्रतियोगितामा युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको च्याम्पिय टोलीको हैसियतमा सहभागी थियो भने अल आइन आयोजक देशको शीर्ष क्लबका हैसियतमा सहभागी थियो । रियलले सोझै सेमिफाइनलबाट प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।
रियल सेमिफाइनलमा जापानी क्लब कासिमा एन्टलर्सलाई हराएर फाइनल पुगेको थियो भने अल आइन अर्जेन्टिनी क्लब रिभर प्लेटलाई पेनाल्टीमा हराएर फाइनल पुगेको थियो ।
रियल यसअघि सन् २०१६ र २०१७ मा लगातार २ वर्ष क्लब विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । घरेलु लिग ला लिगामा भने संघर्ष गरिरहेको रियलले यो उपाधि जितेर २०१८ लाई सुखद् बिदाइ गर्ने भएको छ ।
#club world cup#Real Madridfootball
बाटुलेचौरमा गन्धर्व संग्राहलय, मन्त्री अधिकारीले सारङ्गी रेटेपछि ……….
पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, एक घाइते
कोरोनाका कारण फेवा नवबर्ष महोत्सव स्थगित् ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
पोखरा महानगरको राहत कोषमा ३ करोड ६४ लाख ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
हालको विश्व मण्डलमा ग्रहचक्रको खेल, बैशाख पहिलो साताबाट राम्रो, औषधी पनि ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
पोखरामा लकडाउन ३५ सय व्यक्तीलाई सम्झाइ बुझाई, पासको दुरुपयोग गर्ने गाडी कार्वाहीमा ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
अमेरिकामा एकैदिन १,९६६ को मृत्यु, संक्रमितको संख्या चार लाख बढि ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
गण्डकी प्रदेशबाट कोरोना (कोभिड–१९) को एकै दिन ७० जना स्वाब परीक्षण ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
पोखरामा बिरामी लिन नजाने एम्बुलेन्सलाई कारबाही ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
पूर्व मन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई पितृशोक ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
पोखरा महानगरमा १९ हजार परिवारलाई राहत वितरण गर्दै ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
गण्डकी प्रदेशबाट कोरोना (कोभिड–१९) का ११० परीक्षण, २ पोजेटिभ, १०४ नेगेटिभ ८ पुष २०७५, आईतवार २०:१५
१९ जेष्ठ २०७६, आईतवार २२:४९